Rakotoniaina Pety : « Lehibe mialoha ny fifidianana ny fiainam-bahoaka » | NewsMada
Rakotoniaina Pety : « Lehibe mialoha ny fifidianana ny fiainam-bahoaka »
Inona no zava-dehibe sy maika amin’izao? Fiainam-bahoaka aloha vao fifidianana, raha ny fijerin-dRakotoniaina Pety.
« Lehibe indrindra mialoha ny fifidianana ny fiainam-bahoaka. Tena sahirana ny vahoaka malagasy, na an-tanàn-dehibe na ambanivohitra: tena tsy milamina ny tany, tsy zakan’ny olona ny vidim-piainana. »
Izay ny fanehoan-kevitry ny filohan’ny antoko Tambatra, Rakotoniaina Pety, tao amin’ny haino tsy miankina iray, afakomaly, manoloana ny fironan’ny ankamaroan’ny mpisehatra hanao fifidianana.
Na miteny aza ny tomponandraikitra fa voafehy, ohatra, ny delestazy eto Antananarivo, misy ny any amin’ny faritany. « Aoka tsy ho diso ny mpitondra fa tsy Antananarivo irery i Madagasikara », hoy izy.
Tsy nifidy praiminisitra sy minisitra ny olona, fa nifidy filohan’ny Repoblika izay tomponandraikitra voalohany. « Anjaranay ny miteny fa tsy mandeha izao… Mamitaka raha misy milaza fa mandeha izao », hoy ihany izy.
Tsy ho sarotra, ohatra, ny mandamina ny tany amin’ny tsy fandriampahalemana, fa ny finiavan’ny olona nomena andraikitra no tsy misy.
Iandrandrana fampandrosoana ny fifidianana
Misy andraikitry ny mpitondra, misy andraikitry ny olona manokana nandray anjara tamin’ny fifidianana: diso sy tsy mety ny fomba nanehoany ny safidiny. Ahoana no tsy hiverenan’izay intsony? Matoa ny olona mifidy, miandrandra fampandrosoana.
Mirona amin’ny fifidianana ny mpisehatra politika sy ny mpitondra amin’ny ankapobeny. Tsy zava-baovao ny fifidianana eto Madagasikara. Izay mahatonga azy manontany ny vahoaka malagasy: « Fifidianana olona hanao fampandrosoana ve no hataontsika sa fifidianana hametraka olona hangoron-karena sy hitantana fahefana fotsiny ary ny tombontsoany ihany no jereny toy izay misy sy efa nisy teo aloha? »
Inona no hanaovana fifidianana raha tsy hiteraka fandrosoana? Nahoana no tsy miova ny fiainantsika, nefa manao fifidianana ihany? Rehefa sahirana ny firenena, mieritreritra foana isika fa ny fifidianana no vahaolana, araka ny fanazavany. Nodisoin’ny tantara izay, araka ny fanazavany.
Amin’ny ankamaroan’ny olona, tsy ny fifidianana amin’ny 2018 no lehibe fa ny fiainany. Tokony ho fantatry ny fitondram-panjakana, indrindra ny filohan’ny Repoblika, izany.